Jonga ujikeleze kwiimephu zeApple ufikelela kwizixeko zaseYurophu | Ndisuka mac
Abanye abasebenzisi ePoland baxele ukuba bayibonile imoto yeApple apho ezinikele ekuthatheni nasekuthatheni iifoto kwinqanaba lesitalato ngenjongo yokuzibandakanya koko kubizwa ngokuba Jonga kokukujikelezile. Inkampani yaseCalifornia iqinisekisile ukuba balapho ngenene kwaye bazakubakhona kude kube ngu-Agasti 2021. Ke kuyabonakala ukuba iPoland kungekudala izakuba nomsebenzi wokusebenza.
Ngokwewebhusayithi esemthethweni kuqokelelo lweeMephu zeApple ibonisa imoto yokurekhoda imifanekiso yeApple. Umhlaba ubanjelwe ukujonga ujikeleze Baza kubanjelwa ePoland kude kube ngu-Agasti kulo nyaka. Kwayo le webhusayithi ibonisa ukuba iApple Maps iqale ukuphonononga iqela lamazwe aseYurophu kunye needolophu, kubandakanya iCzechoslovakia, iJamani, iSlovenia, neCroatia. Inqaku laqala ecaleni kohlaziyo lwe-iOS 13 ngo-2019 kunye Sele sinike ingxelo ngokusetyenziswa kwayo kodwa ihlala i-US. Kubonakala ngathi kukujika kwelizwekazi elidala.
Akucaci ukuba inqanaba elitsha lokufota lingahlala phi kubathengi bePoland yasePoland. Ngomhla ka-Meyi 2021, umzekelo, Jonga ujikeleze e-Atlanta, Georgia. Inkampani ikwaqokelela Jonga idatha ejikeleze eHong Kong. Jonga ujikeleze luguqulelo luka-Apple lwendlela yokujonga yesitalato sikaGoogle ekuvumela ukuba uskrole amadigri angama-360 kwaye uhambe ezitratweni. Ukuba iimephu ziJonge idatha ejikeleze indawo oyijongileyo ngoku, kuya kufuneka cinezela i-icon ye-binocular kwimephu okanye kwikhadi lolwazi ukuqala amava e-3D asebenzisanayo.
Este webhsayithi I-Apple igcina uluhlu lweedolophu kunye namazwe apho ukuJongwa khona kufutshane. Njengoko uza kubona, ISpain idweliswe kwikholamu yeeMephu eziMiselweyo. Kuya kufuneka siqhubeke silinde imoto yeApple ukuba idlule kwilizwe lethu kwaye ibambe izitalato.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Jonga ujikeleze kwiimephu zeApple ufikelela kwizixeko ezithile zaseYurophu
Iimoto sele zidlula eSpain. Kwiveki ephelileyo ndabona enye kwisitalato eValencia.
IFirefox ivuselela uyilo lwayo kwaye ibandakanye izinto ezintsha ezinomdla zeMacOS